आँखा झिकेर १४ बर्षिया बालिका करिस्माको बिभत्स बलत्कार ! उपचार खर्च नहुँदा सहयोगको लागि अनुरोध – mero sathi tv
आँखा झिकेर १४ बर्षिया बालिका करिस्माको बिभत्स बलत्कार ! उपचार खर्च नहुँदा सहयोगको लागि अनुरोध
भोजपुर जिल्लाको दक्षिणी आमचोक गाउँपालिकाकी १४ बर्षिय बालिका करिस्मा बिश्वकर्माको बिभत्स तरिकाले बलत्कार भएको छ । दलिद समुदायकी बालिका करिस्माको निर्मम तरिकाले कुटपिट गरी आँखा झिकेर बलत्कार गरिएको हो ।
बालिकालाई सोहि गाउँपालिका ९, सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत सन्तोष श्रेष्ठले निर्मम तरिकाले बलत्कार गरि मार्ने प्रयासमा भिरबाट खसाएर हिँडेका थिए । शनिवार दिउँसो भएको यो घटनामा पिडित बालिकाका परिवारले बालिका अवेर सम्म घर नफर्किए पछि खोजी गरेका थिए र उनलाई मरणाशन्न अवस्थामा भिरबाट उद्धार गरिएको थियो ।
जीवन मरणको अवस्थामा रहेकी बालिकालाई उद्धार गरी उपचारका लागि धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको थियो । बालिकाको बायाँ आँखा पुर्ण रुपमा काम नलाग्ने गरि बिग्रीएको छ । तर आर्थिक रुममा कमजोर उनका परिवारलाई उपचार खर्च जुटाउन मुस्कील परिरहेको छ । जसका कारण बालिकाको उपचार हुन नसकेपछि यति बेला बालिका करिस्मा बिक उपचार सहयोग अभियान सुरु गरिएको छ ।
एकातिर अमानविय ढंगले भएको बहिनीको बलत्कार र अर्को उपचार खर्च नहुँदा पीडित बालिकाका दाजु धन बहादुर बि क सबै संग सहयोगको लागि अनुरोध गरिरहेका छन् ।सहयोगका लागि पीडित बालिकाका दाजु धन बहादुर बि क को मोवाईल नं – ९८०७०४२२९६
एकातिर अमानविय ढंगले भएको बहिनीको बलत्कार र अर्को उपचार खर्च नहुँदा पीडित बालिकाका दाजु धन बहादुर बि क सबै संग सहयोगको लागि अनुरोध गरिरहेका छन्
त्रिशुलीमा भएको बस दुर्घटनामा सप्तरीका एकै परिवारका ८ जनाको ज्यान गयो (भिडियो हेर्नुहोस)